नेपाल टेलिकमको सेवा प्रयोग गर्नेलाई कसरी दिइँदैछ सेयर ? - नेपाल एक्सन Online News Nepal
Homeदेशनेपाल टेलिकमको सेवा प्रयोग गर्नेलाई कसरी दिइँदैछ सेयर ?
काठमाडौं । सरकारी सेवाप्रदायक नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी (नेपाल टेलिकम)को स्वामित्व र प्रतिफलमा अब सेवाग्राहीको पहुँच विस्तार गरिने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको लागि आएको बजेट वक्तव्यमा कम्पनीका मोवाइल, ल्यान्डलाइन र इन्टरनेट सेवा उपभोग गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिलाई कम्पनीको २२ प्रतिशत शेयर विनिवेश गरिने उल्लेख छ ।
प्रयोगकर्ताले भ्वाइस कलको सट्टा ‘ओभर दी टप’ (ओटीटी) सेवा प्रयोग गर्दा टेलिकमको आम्दनी खुम्चँदो छ । त्यसबाहेक महामारीमा पनि कम्पनीले विभिन्न छुट सुविधा दिनु परेको थियो ।
Previous articleजसपा : ओलीकै कारण बन्यो, ओलीकै कारण फुट्यो
Next articleविप्लव भन्छन्– पार्टीले मलाई २० हजार तलब दिन्छ